पुरुष र महिलाको चरमोत्कर्ष फरक हुन्छ भन्छन् । यो हल्लामात्रै हो कि सत्य हो ? अग्र्याजम या चरमसुख या चरमोत्कर्ष भनेको सम्भोग गर्दा प्राप्त हुने तीव्र र आनन्ददायी शारीरिक सुख हो । हस्तमैथुनद्वारा पनि चरमसुख प्राप्त गर्न सकिन्छ
किन पुरुषलाई भन्दा महिलालाई मनपर्दैन कण्डमको प्रयोग ?
प्रकाशित मिति : आइतवार, भदौ ४, २०७४
एजेन्सी । सेक्स एउटा यस्तो चीज हो जसको इच्छा प्राय सबैमा हुन्छ । एउटा उमेर लागेपछि सेक्सप्रति जो कोहीको रुची जान्छ । उमेर पुगेपछि शारिरीक सम्बन्ध बनाउनका लागि युवा युवतीहरु तयार हुन्छन् । यो स्वभाविक पनि हो । यो हरेकले जान्नु
वास्तुशास्त्र भन्छः पति दायाँ र पत्नी बायाँ तर्फ सुते सम्बन्ध राम्रो हुन्छ
यदी श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा तनाव छ भने यसमा तपाईहरुबीचको सम्बन्धले मात्र काम गरेको हुदैन । दुईजनाबीचको असमझदारीका कारण यस्ता समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारणमा वास्तु दोष पनि रहेको बताइन्छ । जसको हलका लागि तपाईले
केराको फूल खानुहोस् यी ८ रोग भगाउनुहोस्
यी आठ गल्ती जसले बढाउँछ तपाईंको तौल
फिट रहनका लागि हामी दैनिक विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छौं । तर यी सबै मेहनत त्यतिबेला बेकार हुन्छन् जब हामी अफिसमा केही गल्ती गर्छौं । यी गल्तीका कारण् तौल बढ्ने गर्दछ । आज हामी तपाईंलाई यिनै गल्तीबारे जानकारी दिँदैछौं । १.
श्रीमती होउन् या प्रेमिका, असल महिला मित्र नै किन नहोउन्, तपाई (पुरुष)सँग उनीहरुका केही अपेक्षा हुन्छन् । महिलाले पुरुषसँग राख्ने धेरैजसो अपेक्षा भावनासँग जोडिएका हुन्छन् । अखिर महिलाले पुरुषबाट के अपेक्षा राखेका हुन्छन् त ?
जब रात पर्न थाल्छ तब महिलाहरु पनि रोमान्टिक मुड बनाउने गर्छन् । हालसम्म महिलाहरु लाजका कारण रातमा सहबास गर्न चाहने बताइँदै आइएको थियो । तर, अनुसन्धानकर्ताले यसबारे अध्ययन गरेका छन् । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार महिलाहरु आफ्नो
टुसा पलाएको आलु देखि काँचो अण्डा र दुधसम्म, यी हुन् गर्भपतन गराउने खानेकुराहरु…
एजेन्सी । गर्भावस्था निकै जटिल तथा जोखिमपूर्ण अवस्था हो । आमा र गर्भको शिशु दुबैको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि यो समयमा निकै ध्यान पूराउनुपर्ने हुन्छ । गर्भवती महिलाहरु खासगरी काँचो तथा कम पाकेको खानेकुराबाट बँच्नु पर्दछ ।
सेक्स गरिसकेपछि किन निदाउछन् पुरुषहरु ? यस्तो छ कारण
मानव जीवनमा यौनको पनि महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । तर नेपाल लगाएत विकसित मुलुकहरुमा भने अझै यौनलाई सङकुचित तरिकाले हेर्ने प्रचलन कायमै छ । पछिल्लो समय समयको परिर्वतन संगै मानिसहरुको यौन प्रतिको धारणा परिर्वतन हदै गइरहेको छ ।
‘होलबडी’ चेकअपमा कुन-कुन जाँच गरिन्छ? कसरी गर्ने पूर्व तयारी?
- डा.गुरुप्रसाद मैनाली हिजोआज जनमानसमा स्वास्थ्यप्रतिको सजगता बढ्दै गएको छ। समय-समयमा आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने चलन सुरु भएको छ। आमनागरिकको यही सचेतना बुझेर स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूतिर आकर्षित गर्न स्वास्थ्य